Garoowe: Puntland oo maxkamad soo taagaysa maxaabiistii ay ka qabteen Al-Shabaab, dagaalkii ay la galeen bishii Maarso
Dawladda Puntland ayaa sheegtay in bishaan aan ku jirno ee May ay sharciga horgayn doonto Maxaabiistii faraha badnayd ee laga qabtay alshabaabkii Puntland ku soo duulay intii u dhexaysay 14-kii illaa 23-kii Maarso 2016, kuwaas oo doonyo uga soo dagay xeebaha Mudug iyo Nugaal.
Maxaabiista oo iskugu jira Carruur aan qaangaarin iyo kuwa waaweyn oo qaangaaray ayaa dhammaantood sharciga la horgayn doonaa, waxayna mudan doonaan sharcigu sida uu ku kala xukumo, balse waxaa la filayaa inaan la cinqaabi doonin kuwa aan qaan gaarka ahayn ee carruurta lasoo khalday.
Xeer ilaaliyaha guud ee Maxkamada Ciidamada Qalabka Sida Puntland ee shanta Gobol Bari, Karkaar, Sanaag, Haylaan iyo Gardafuu Col. Cabdikariin Xasan Firdhiye ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in maxaabiista sharciga la horgaynayo iyadoo mudadii bilaha ahayd ee gacanta lagu hayey carruurta aan qaan gaarka ahayn ay heleen xannaano fiican iyo dhaqancelin, halka kuwa dambiileyaasha waaweyn meel gaar ah lagu hayey.
Baaritaano lagu sameeyay iyo gal dacwadeedkoodii ayuu sheegay in lasoo gabagabeeyay, islamarkaasina maxkamadda ciidamada qalabka sida ay diyaar u tahay inay sharciga marsiiso Maxaabiistaan.
Col. Cabdikariin Xasan Firdhiye ayaa 24-kii Maarso 2016, sidaan oo kale warbaahinta u sheegay in la toogan doono Maxaabiista qaangaarka ah maadaama ay yihiin dambiileyaal dagaal oo furimaha dagaalka laga soo qabtay.